စိန်ခေါ် မှု ကတော့ လာပြီ။... ACTION ဘာယူမှာ လဲ? ~ MSU Portal
5/17/2013 12:55:00 AM Navi Kyaw 1 comment
Credit...Ko thar nge
MLC 2006 ဆိုတာ ဒါလား။
စိန်ခေါ် မှု ကတော့ လာပြီ။ အတိအကျ တင်ပေးမယ်ဆို ပါတယ်။ ACTION ဘာယူမှာ လဲ?
တစ်ယောက် ၃၅ သိန်း
agent နာမယ် က ကို ထင် ဇော်မင်း ။ phone no, 0943020827, 09 5505984. HIGH SEA BUNKER အမည် ခံ ဆီခိုး ဘုတ် တွေ တင် တယ်၊ နေတာ က သစ္စာဥ ယာဉ် အိမ်ယာ. တွေ့ချင် ရင် ဂမုန်းပွင့် J .Donuts မှာ ရှိတတ်တယ်။ လူသစ် တ ယောက် ၃၅ သိန်း ။ လူ ဟောင်း ၁၈ ရွက်။ တချက် မှောက် ရော ၂ ချက် မှောက်ရော တင် တယ်။ COC လူသစ် ၁၂ ရွက် တဲ့။ ပြော လိုက် ရင် တော့ highsea bunker. ဟို ရောက် တော့ ဆီ မှောင်ခို။ ဘာ ရုံး ခန်းမှ မရှိဘူး။ ပြသနာ ဖြစ်ရင် ရှောင် လို့ ရ အောင်။ရိုက်ကြေး ကို တောင် အိမ် အထိ လိုက်ယူ တယ်။ သူ့နေ ရာ လူ သိမှာ စိုး လို့ ။ လက်မှတ် တု လဲ သူ့ကို သာ ပြော လိုက်။ လုပ်ပေးတယ်။ ခု သူ့ဆီက တက်သွား တဲ့ တခိုင် လုံး ရွှေ သင်္ဘော တစီး vietnam မှာ အဖမ်းခံ ရ တယ်။ ၁၄ ယောက်ံမြန်မာ . သင်္ဘော နာမယ် M.T. A1. ဖမ်းခံ ရတာ တလ ကျော်ပြီ။ ခု သင်္ဘော မှာ ၅ ယောက် ပဲ ကျန်တယ်။ ကျန်တဲ့ လူ တွေ အချုပ်ထဲ မှာ owner က လဲ ဘာ မှ မလုပ် ပေး ဘူး။ ရန်ကုန် မှာ ကျန်တဲ့ မိသားစု တွေ က သူ့ဆီဖုန်း ဆက် ရင်ဖုန်းမကိုင်ဘူး . ဖုန်းမှားတယ်ဆို့ ပြီးအရူး ကွက် နင်းတယ်။ သူ့ဆီက ထွက် တဲ့ နောက်တစီး ။ နာမယ် က yong soon 6. လစာ မရ တာ ၃ လ ကျော် ပြီ။ ကမ်းလဲ မကပ် ရဘူး ။ ခု အစားအ သောက် နဲ့ရေ ချို ပြတ် တော့ Capt.က PORT မှာ သွားအဖမ်းခံ ဖို့လုပ် နေ တယ်. အဲ့ဒီ သင်္ဘော ကို လူ ထက်တင် ဖို့ခု လူ ရှာ နေ တယ်။ မသိပဲ လိုက် မိ ကျ မှာ စိုး လို့post တင် တာ ပါ။ SECD က တာဝန် ရှိ လူ ကြီးများ လဲ ဒီ လူ ကို ရှာ ဖွေ အရေးယူ ပေးပါ။ vietnam မှာ အဖမ်းခံ နေ ရ တဲ့ မြန်မာ သင်္ဘော သားတွေ အတွက် လဲ ဘယ် လို ဆောင်ရွက် သင့် လဲ အကြံ ပေးကျ ပါ။ crew တွေ က လူ သစ် လေး တွေ ပါ။ COC လူ သစ် လေး လဲ ပါ ပါ တယ် ။ ကြီးလေး ကြီး က တော့ အမှန် မဟုတ်ပါ ဘူး။ ဒီလူ ရဲ့ email က htinzawminn09@gmail.com ပါ။ ခု ဒုက္ခ ရောက် နေ တဲ့ သင်္ဘော တွေ ရဲ့ IMO no. တွေ ကို ထပ် စုံ စမ်းပြီးတင် ပေး ပါ့ မယ်။ ကျေးဇူး ပြု ပြီး ဒီ post ကို share ပေး ကျ ပါ။ ကျေးဇူး တင် ပါတယ်
Credit to Ko thar nge
Ko Lizard says:
Bar mha ma Pyaw tot par